१४ मंसिर २०७४, बिहीबार १२:०५ – ehalkhabar
Home > १४ मंसिर २०७४, बिहीबार १२:०५ > १४ मंसिर २०७४, बिहीबार १२:०५
Month: १४ मंसिर २०७४, बिहीबार १२:०५
Raju Kaphle १४ मंसिर २०७४, बिहीबार १२:०५ November 30, 2017 विचित्र विश्व	0
मंसिर १४ । तपाईंलाई थाहा होला कि सपना र जिन्दगीका बीचमा गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । कहिले सपनामा मानिसको दबिएको सपना पूरा हुन्छ भने कहिले सपनामा देखिएका कुराले जिन्दगीमा आउने घटनाको एहसास गराउँछ । यदि सपनामा कोही मरेका मान्छे देखिए भने के हुन्छ त ? मनोवैज्ञानिकका अनुसार कुनै मरेको मानिस सपनामा देखिन्छ
Raju Kaphle १४ मंसिर २०७४, बिहीबार ०७:१९ November 30, 2017 राष्ट्रिय	0
मङ्सिर १४। नेपाली काँग्रेसका नेता एवं कास्की क्षेत्र नं ३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार शुक्रराज शर्माले आफूहरूले घुस नखाने र कसैलाई घुस खान नदिइने बताउनुभएको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका– २५ स्थित पीपलडाली समाजद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले समाजमा सुशासन कायम गराउँदै विकास र समृद्धिका काममा पार्टीले अगुवाइ गर्ने बताउनुभयो । जनताको
Raju Kaphle १४ मंसिर २०७४, बिहीबार ०६:५५ November 30, 2017 मुख्य समाचार	0
मंसिर १४ । सुनसरीको इटहरी–९ भलादमी चोकमा नेपाली कांगे्रसका नेता बिजयकुमार गच्छदारको चुनावी सभास्थल नजिकै बम बिस्फोट भएको छ । सो बम बिस्फोटमा परी एक बालिकसहित ३ जना घाइते भएका छन् । सो घटनापछि स्थानीयवासी त्रसित बनेका छन् । घाइतेहरुको इटहरी मेडिकल हल र सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
Raju Kaphle १४ मंसिर २०७४, बिहीबार ०५:२३ November 30, 2017 मुख्य समाचार	0
मंसिर १४ । सर्लाही क्षेत्र नं. ४ मा प्रतिनिधिसभाका लागि बाम उम्मेदवार रहेका माओवादीका शिवपूजन रायको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले रद्द गरे पछि उनको समर्थन राजपाका उम्मेदवार राकेश कुमार मिश्रलाई प्राप्त भएको छ । सर्वोच्च अदालतको कारण देखाउ आदेशपछि रातो पासपोर्ट काण्डमा दोषी ठहरिएका रायको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले ९ गते रद्द गरेको
Raju Kaphle १४ मंसिर २०७४, बिहीबार ०४:३५ November 30, 2017 मुख्य समाचार	0
मंसिर १४ । जटिल मतपत्र र गठबन्धनका कारण लोकतान्त्रिकको भन्दा बाम उम्मेदवारहरुको मत धेरै बदर हुने सम्भावना देखिएको छ । निर्वाचनमा एउटा मतदाताले चारवटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्छ । बाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गठबन्धन गरेका छन् भने समानुपातिकमा भने कुनै गठबन्धन छैन । मतदाताले प्रत्यक्षतर्फ सम्बन्धित गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत हाल्नुपर्ने हुन्छ
Raju Kaphle १४ मंसिर २०७४, बिहीबार ०४:०२ November 30, 2017 राष्ट्रिय	0
मंसिर १४ । चितवनको खैरहनीमा नेपाली कांग्रेस तथा एमालेको पार्टी कार्यालय अगाडि बम फेला परेको छ । बम फेला परेपछि सेनाको डिस्पोजल टोली घटनास्थलतर्फ गएको छ । उता सोही बमका कारण पूर्वपश्चिम लोकमार्ग समेत अवरुद्ध हुन पुुगेको छ ।
Raju Kaphle १४ मंसिर २०७४, बिहीबार ०३:५३ November 30, 2017 आर्थिक	0
मंसिर १४ । जीवन बीमा सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी युनियन लाइफ इन्स्युरेन्सले सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्ने भएको छ । सो बीमा कम्पनीको वार्षिक साधारणसभाबाट ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर जारी गर्ने निर्णय भएको हो । रु. १०० अंकित ६४ लाख ५० हजार कित्ता शेयर सो कम्पनीले निकट
Rajendra Kaphle १४ मंसिर २०७४, बिहीबार ०३:४५ November 30, 2017 धर्म	0
मेष : सुरुमा खर्च लागे पनि दिगो फाइदा हुने काममा लगानी गर्ने अवसर जुट्नेछ। चुनौतीहरू पन्छाउँदै रोकिएका काम बनाउन सकिनेछ। टाढाका साथीभाइको निम्तो प्राप्त हुन सक्छ। छर–छिमेकमा असमझदारी बढ्न सक्छ। तापनि, मध्याह्नदेखि पारिवारिक जमघटले आनन्द दिलाउनेछ। सहयोगीहरूले काममा उत्साह जगाउनेछन्। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुनेछ। बृष : आँटेको काममा अरूको मुख ताक्नाले
Raju Kaphle १३ मंसिर २०७४, बुधबार १२:५९ November 29, 2017 आर्थिक	0
मंसिर १३ । लगभग एक महिनाको कडा परिश्रमपछि नासाका अन्तरिक्ष यात्रीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा चाइनिज बन्दागोभी उब्जाउन सफल भएका छन् । नासाका अनुसार अन्तरिक्षयात्री पेगी विटसनले जापनको ‘तोक्यो बेकाना’ नामक बन्दागोभी उब्जाएको हो । सो बन्दागोभीमध्ये केही अन्तरिक्ष यात्रीले खान पाउनेछन् भने केही वैज्ञानिक अध्ययनका लागि राखिनेछ । नासाका अनुसार नासाले अन्तरिक्ष
Rajendra Kaphle १३ मंसिर २०७४, बुधबार १२:५० November 29, 2017 राष्ट्रिय	0
चितवन, १३ मंसिर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो बाँकी जीवन सबै नेपालीको घरमा प्रकाश ल्याउनमा समर्पित हुने बताउनुभएको छ । चितवन क्षेत्र नं ३ को शुक्रनगरमा आज आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले छोरा प्रकाशको आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गर्दै गर्दा आफूले यस्तो संकल्प गरेको बताउनुभयो । “मेरो